နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့အဆင်းလှသောအစ်မအိမ်အပြင်ပန် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan -wallpro.com.tw
ပထမဦးစွာရေ seepage ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အဟောင်းအဆောက်အဦး၏အပြင်ပန်းနံရံရေရှည်နေရောင်, မိုးနှင့်မြေငလျင်အောက်မှာကရေစိုခံပစ္စည်းများ၏ရေတွန်းလှန်ပစ္စည်းပေါ်လာဖို့လွယ်ကူသည်, ထို tile ကိုများနှင့်ပြတင်းပေါက်ဘောင်၏ရေအကြောင်းအရာဖြစ်စေတဲ့မြင့်မားဖြစ်လာ tile ကိုသို့မဟုတ်ထိုပြတင်းပေါက်ဘောင်ကိုချွတ်လဲပင်ပြင်မြို့ရိုးကိုဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအက်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေ! ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့မြို့ရိုးကို seepage နှင့်မြို့ရိုးအသောမြို့ရိုးဟာကင်ဆာအဖြစ်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေရန်လွယ်ကူသည်။ သငျသညျပြည့်ပြည့်စုံစုံပြဿနာဒီလိုမျိုးဖြေရှင်းလိုလျှင်ပထမဦးဆုံးအရာအိုမင်းအဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုတိုးတက်လာဖို့ပါ!
ထိုင်ဝမ်အတွက်အဆောက်အဦးများယနေ့အများစုမှာနှစ်ထပ် tile စီမံကိန်းကိုကိုသုံးပါ, ဒါကြောင့်အဟောင်းအဆောက်အဦး၏မျက်နှာစာအများစု detach လုပ်လိုက်သောပါပြီ။ အဘယ်သူမျှမချက်ချင်းပြဿနာလည်းမရှိလြှငျ, ထိုပြဿနာကိုကောင်းမွန်စွာကိုင်တွယ်ရပါမည်။ အဆိုပါအုပ်ကြွပ်လဲထိခိုက်စေအိမ်ထောင်စု, လမ်းသွားလမ်းလာသို့မဟုတ်ဒါဟာမော်တော်ယာဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦး၏စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီကထိခိုက်သေဆုံးမှုနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ကိုထမ်းရကြမည်။ သက်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များပြစ်မှုဆိုင်ရာတာဝန်ကိုထမ်းရကြမည်။ သို့အတွက်ကြောင့်အဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုလုံးဝ refurbished ခြင်းကိုအလွန်အရေးကြီးသည်။
ပုံစံ - 6-1-03
ပဌမ,အဆောက်အဦး၏ texture တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်
သင်တစ်ဦးကြယ်ပွင့်တည်နေရာသို့မဟုတ်အဆင်ပြေလူနေမှုအဆောက်အဦနှင့်အတူအဆောက်အဦးမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်,ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအဆောက်အဦး၏အပြင်ပန်းအပြီး,သငျသညျကိုအလွန် 10 အားဖြင့်အဆောက်အဦးကိုယ်တိုင်က၏တန်ဖိုးတိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်%20%,လျင်မြန်စွာသစ်ကိုအိမ်မှာပိတ်ဖို့.စျေးနှုန်းကွာဟမှုပိုကောင်းတဲ့အိမ်ကစျေးနှုန်းဖန်တီး.
စာရင်းများအရ,ဒုတိယအများစု-တူညီသောခရိုင်အတွင်းရှိလက်အိမ်ယာစျေးကွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ပါလိမ့်မည်&quote;အိမ်တော်အသက်အရွယ်&quote;, &quote;အသွင်အပြင်သည်အို&quote;, &quote;အဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးပေါ်မှာငလျင်&quote;နောက် ... ပြီးတော့.အိမ်သူအိမ်သားစျေးနှုန်း 50 နီးပါးဖြစ်ပါသည်%အသစ်ကအိမ်ရဲ့စျေးနှုန်း.အဘယ်အိမ်သူအိမ်သားစျေးနှုန်းနဲ့ပတျသကျတဲ့အဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်?ဒါပေါ့,များစွာသောအဆောက်အဦးအသစ်အားနေအိမ်များ၏စျေးနှုန်းမှပြန်သွားကြပြီ,သူတို့တစ်ဖန်ပိုကောင်းအိမ်ရာစျေးနှုန်းများဖန်တီးရန်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်.
အဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးအပေါငျးတို့သအိမ်ထောင်စုကပါဝငျသောကြောင့်,အဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုဆွဲခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်က,ကြိုတင်မဲအတွက်တစ်ခုလုံးကိုအိမ်နီးချင်းနှငျ့ဆကျသှယျအပေါင်းတို့နှင့်အိမ်ထောင်စုများ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရှာလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်အားလုံးအိမ်ထောင်စုအားဖြင့်မျှဝေရပါမည်.အဆိုပါတူညီပြီးပမာဏတွက်ချက်မှု၏နည်းလမ်းပေါ် မူတည်. ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်.ယေဘုယျအားဖြင့်,ဒါဟာသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်&quote;ping ရဲ့နှုန်းယူနစ်စျေးနှုန်းနှုန်း&quote;နှင့်&quote;ping ရဲ့အချိုး&quote;.Ping ၏တွက်ချက်အရေအတွက်အိမ်ထောင်စုအတွက် Ping ၏နံပါတ်ပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်'မိုးလုံလေလုံပိုင်ဆိုင်မှု့.
(ပိုင်ရှင်၏ကွဲပြားခြားနားမှု'မိုးလုံလေလုံပိုင်ဆိုင်မှု Ping ့/အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှု Ping)x ကစုစုပေါင်းဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်,တစ်ခုချင်းစီကိုအိမ်သူအိမ်သား ping ရဲ့နှုန်းကုန်ကျစရိတ်(ping ရဲ့နှုန်းယူနစ်စျေးနှုန်း),အိမ်သူအိမ်သားရှယ်ယာနှုန်းစုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်/ပိုင်ဆိုင်သူ'မိုးလုံလေလုံပိုင်ဆိုင်မှု့(ping)သို့သျောလညျး,အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်များတူညီ၏ကုန်ကျစရိတ်များ,ကတထောင်အများအပြားယွမ်ယူစေခြင်းငှါ.ထိုကွောငျ့,အိမ်ထောင်စုများ၏အများဆုံးပေးဆောင်ဖို့လိုလိုလားလားရှိလျှင်ပင်,အိမ်ထောင်စုများ၏သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကဆန္ဒရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ,အနည်းငယ်သောအိမ်ထောင်စုငွေပေးချေမှုလည်းမြင့်မားကြောင်းတိုင်ကြားသောကြောင့်,.သူတို့ထဲကအများစုဟာတစ်ဦးသဘောတူညီမှုရောက်ရှိရန်ခက်ခဲ.သို့သျောလညျး,2019 ခုနှစ်,အစိုးရကလည်းအဆောက်အဦး၏ပြင်ပနံရံများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးပေးအပ်,အရေပြား၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုလျှောက်ထားရန်ဒေသခံများကပေး.အဆိုပါခရိုင်များနှင့်မြို့အစိုးရများဟောင်းအိမ်၏ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံထွက်သယ်ဆောင်ရန်လူများကိုအားပေးနိုင်ရန်အတွက်အဆောက်အဦး၏ပြင်ပနံရံများများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးများ.အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုသင်လျှောက်လွှာနည်းလမ်းအဘို့အသီးအသီးခရိုင်နှင့်မြို့၏မြို့ update ကိုရုံးကိုမေးနိုင်သည်ဟုအကြံပြု.
ဖြည့်စွက်ကာ,ပိုင်ရှင်အဆောက်အဦး၏အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုလျှောက်ထားလိုပါက,ဒါကြောင့်ပြင်ပမြို့ရိုးပေါ်မှာ install လုပ်ထားခဲ့လျှင်,ထိုကဲ့သို့သောသံပြတင်းပေါက်အဖြစ်,လသာဆောင်သို့မဟုတ်အခြား2ဆောက်လုပ်ရေး extension များ,အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုတရားမဝင်ဆောက်လုပ်ရေး၏အချိုးအစားနှင့်အရေအတွက်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်.ထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုနှင့်လိုသလိုထုတ်ယူဆင်ခြင်ခြင်း,အတည်ပြုမပေးလျှင်ပင်,15 မှတက်နုတ်ယူလိမ့်မည်%အဆိုပါထောက်ပံ့ငွေများ,အဆောက်အဦးလျှင်ဒါ'ပြင်ပနံရံများတရားမဝင် built နေကြသည့်,ဒါကြောင့်ပလီကေးရှင်းများအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတ်ပါ,ထိုသို့လျှောက်လွှာသွားခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း,လွန်လျှင်,ထောက်ပံ့ငွေပမာဏကိုထိခိုက်စေသည့်အပြင်,အခြားအစီအစဉ်အားလုံးအိမ်ရှင်မိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်စရိတ်မှာအဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးကိုရုတ်သိမ်းပေးရန်မည်ဟုဆိုလိုသည်.
ထိ မိ. လဲအုတ်များ၏ပြဿနာများအတွက်,ဥပမာ,ထိုင်ပေမြို့အတွက်,အဆောက်အဦး၏ပြင်ပရိုးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံများအတွက်အဆိုပြုချက်ကိုလည်းမရှိ,နေသမျှကာလပတ်လုံး 10 နှစ်ကျော်ရာအိမ်အသက်အရွယ်နှင့် The ပြင်ပမြို့ရိုးကိုချွတ်ကွာအဆိုပါ tile ကိုအတူတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်သည့်ပုဂ္ဂလိကအဆောက်အအုံလမ်းဘေးရင်ဆိုင်နေရသောကြောင့်,အရာအလေးအနက်ထားလမ်းလျှောက်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုထိခိုက်.အဆိုပါထိုင်ပေမြို့အစိုးရနှစ်ခုကုန်ကျစရိတ်ထောက်ပံ့ပါလိမ့်မယ်&quote;အဆိုပါရိန်းကြေး&quote;နှင့်&quote;အဆောက်အဦး၏အပြင်ဘက်မြို့ရိုးတည်ဆောက်ရေးကုန်ကျစရိတ်&quote;.40,000 ယွမ်,အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထိုင်ပေမြို့အစိုးရမြို့ပြသက်တမ်းတိုးရုံးဖို့တောင်းနိုင်ပါတယ်.
အဆောက်အဦး၏အပြင်ပန်းရိုးကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များ,အပြင်မြို့ရိုးအများ၏ရေစိုခံတာ,ပြင်ထရံခွံ,ပြင်ပရိုးလျှောက်လွှာ,နှင့် ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအသင်း,ChengLin ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပြင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအပေါ်အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်တကွသင်ပေးပါလိမ့်မယ်/အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုအင်ဂျင်နီယာ/အပြင်ပန်းမြို့ရိုးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ.